अपहरित गाउँपालिका अध्यक्ष मुक्त – sunpani.com
अपहरित गाउँपालिका अध्यक्ष मुक्त
नेपालगञ्ज – नेकपा विप्लव समूहको अपहरणमा परेका ठाँटीकाँध गाउँपालिका, दैलेखका अध्यक्ष धिरबहादुर शाहीको सशस्त्र प्रहरीले कालीकोटबाट सकुशल उद्दार गरेको छ ।
शाहीलाई शनिबार राति करिब एक बजेतिर घरमा सुतिरहेकै वेला अज्ञात समूहको अपहरण गरेको थियो । लगातार ढोका ढकढक्याएपछि शाहीकी पत्नी श्रीमती इलाले ढोका खोल्ने वित्तिकै १०–१२ जनाको नकावधारी समूह घरमा पसेको थियो ।
उनीहरुले सोधपुछ गर्नुछ भन्दै शाहीलाई उठाउन खोजे । इलाले शाहीलाई लैजान दिनु भएन । लैजाने नै हो भने आफू पनि सँगै जाने बताउनुभयो । दुबै जनालाई लिएर गएको समूहले करिब दुई घन्टा पैदल हिँडेपछि इलालाई जंगलमा छाड्यो ।
छुटेपछि उनले गाउँपालिकाको वडा नं. १ का वडाध्यक्ष नर्तमबहादुर बुढा उनलाई उनले खबर गर्नुभयो । बुढाले प्रहरी र स्थानीय प्रशासनलाई घटनाबारे जानकारी गराउनुभयो ।
इलाले आफ्ना श्रीमानलाई लिएर हतियारधारी समूह कालिकोटतिर लागेको सूचना प्रहरीलाई दिनुभयो । त्यही सूचनाअनुसार शाहीको खोजीमा प्रहरीसँगै सशस्त्र प्रहरीको कालिकोट गुल्मको टोली पनि अपरेशनमा खटियो ।
विप्लव समूहले अपहरण गरेको हुनसक्ने अशंकामा सम्भावित क्षेत्रलाई लक्षित गरेर अपरेशन चलाएको थियो । वडा नं. २ का वडाध्यक्ष रुपालाल विश्वकर्माको टोलीले पनि दैलेख र कालिकोटको सीमा क्षेत्रमा खोजी तीव्र बनाएको थियो ।
साँझ पौने ६ बजेतिर कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिका–१, छाती क्षेत्र आसपास सशस्त्र प्रहरीको टोली पुगेको थियो । सुरक्षा सम्बद्ध अधिकृतहरुकाअनुसार विप्लव समूहका व्यक्तिले पनि शाहीलाई त्यही इलाकामा पु¥याएका थिए ।
संयोगवस् विप्लव समूहले शाहीलाई राखिएको घर परिवर्तन गर्न लाग्दा एक महिलाले देखिन् । र, उनलै सुरक्षा निकायमा खबर भयो । प्रहरीले कालिकोटको शुभकालिका–१, छाती क्षेत्रबाट उद्धार ग-यो ।